[Wednesday, March 7th, 18] :: Qeybtii labaad tahriibayaal laga keenay Libya oo soo gaaray Muqdisho
Muqdisho (RH) Dowladda Soomaaliya ayaa maanta oo Arbaca ah magaalada Muqdisho keentay 13 qof oo ka mid ahaa tahriibayaasha ku sugnaa dalka Libya.
Dadkan oo u badan dhallinyaro ayaa markii ay ka soo dageen garoonka diyaaradaha Muqdisho, waxaa wajiyadooda ka muuqday farxad maadama ay ka soo laabteen waddankooda isla markaana ay ka soo badbaadeen gacanta kooxaha magafayaasha ee Libya ku sugan.
Waa qeybtii labaad oo ka mid ah dadka laga keenay dalka Libya, horrey 11 qof oo ay ku jiraan carruur iyo dumar ayaa la keenay magaalada Muqdisho.
Ergayga xafiiska ra’iisal wasaaraha u qaabilsan arrimaha tahriibayaasha Maryan Yaasin ayaa sheegtay in ay sii wadi doonaan sidii Soomaalida ku dhibaateen waddamada dibadda dib loogu soo celin lahaa waddankooda.
Illaa hadda 23 qof oo Soomaali ah ayaa laga soo celiyey kuwaasoo ku xirnaa goobaha dowladda ay maamusho.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa bishii December amray in la soo celiyo tahriibayaasha ku sugan dalka Libya kaddib markii TV-ga CNN-ka uu baahiyey sawirro naxdin leh oo ay ka muudaan tahriibayaal lagu kala iibsanayo Libya isla markaana la adoonsanayo.
Tirada guud ee maxaabiista Soomaalida ee ku sugan Libya ayaa lagu qiyasaa 1000. Ugu yaraan 350 qof Soomaali ah ayaa ku xiran xabsiyada dowladda Libya waxaa ku jira 280 rag ah.
posted on Wednesday, March 7th, 18